Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Nampitandrina ny mpitsidika momba ny vokatra azo avy amin'ny sunscreen i Hawaii
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nampitandrina ireo mpizahatany any Hawaii momba ny vokatra azo avy amin'ny sunscreen
Johnson & Johnson Consumer Inc. dia mitadidy an-tsitrapo an-tsitrapo ny làlan'ny vokatra NEUTROGENA sy AVEENO aerosol mpamorona masoandro miisa dimy.
Ny fampiasana ny masoandro dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fisorohana ny homamiadan'ny hoditra.
Ny fonosana masoandro izay tadidy dia fonosina amin'ny kapoaka aerosol ary zaraina manerana ny firenena.
Tokony hitsahatra tsy hampiasa ireo vokatra voakasik'izany ireo mpanjifa ary hanary na hamerina azy ireo.
The Departemantam-pahasalamana any Hawaii (DOH) manaitra ny mponina sy ny mpitsidika izany Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) dia mitadidy an-tsitrapo an-tsitrapo ny lisitry ny vokatra NEUTROGENA® sy AVEENO® aerosol mpamorona masoandro miisa dimy. Ny fitsapana nataon'ny orinasa dia nahitana ambaratonga ambany benzene amin'ny santionan'ny vokatra. Tokony hitsahatra tsy hampiasa ireo vokatra voakasik'izany ireo mpanjifa ary hanary na hamerina azy ireo.
Ireo vokatra notadidina dia sunscreens miparitaka, indrindra:
Masoandro fanamasoandro fiaramanidina NEUTROGENA Beach Defense.
NEUTROGENA Masoandro fanamainana aerosol mangatsiaka maina.
NEUTROGENA takelaka fiarovan-tena aerosol fiarovana isan'andro tsy hita maso.
Masoandro fitaratra-masoandro aerosol an'ny NEUTROGENA Ultra Sheer.
AVEENO Protect + Mamelombelona takelaka fiaramanidina aerosol.
Ny fonosana masoandro izay tadidy dia fonosina amin'ny kapoaka aerosol ary zaraina manerana ny firenena, ao anatin'izany i Hawai'i, amin'ny alàlan'ny mpivarotra antsinjarany. Ny telo amin'ireo takalon'aina voakasiky ny masoandro dia misy oxybenzone sy / na oktinoxate, akora voarara tsy hamidy na haparitaka any Hawaii araka ny Fizarana 11-342D-21, lalàna nohavaozina Hawaii, nanomboka ny volana Janoary 2021.
Benzene, ilay akora simika hita amin'ny tabilaoandro voadona, dia fahita matetika amin'ny tontolo iainana ao anatin'izany ny fihenan'ny fiaran'ny moto sy ny setroka sigara, ary fantatra fa miteraka homamiadana amin'ny olombelona. Benzene dia tsy fangaro amin'ny vokatra vita amin'ny masoandro ary ambany ny haavon'ny benzena hita amin'ireo vokatra tadidy. Miorina amin'ny fampahalalana amin'izao fotoana izao, ny fielezana isan'andro amin'ny benzene amin'ireto vokatra amin'ny sunscreen ireto dia tsy nampoizina hiteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Na izany aza, ampahatsiahivina ireo vokatra ireo mba hisorohana ny fihanaky ny sela. Ny JJCI dia manadihady ny mety ho antony fandotoana izay nahatonga ny fisian'ny benzena amin'ny vokatra vokariny.
Ny fampiasana ny masoandro dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fisorohana ny homamiadan'ny hoditra. Tokony hanohy handray fepetra fiarovana ny masoandro ny olona, ​​ao anatin'izany ny fampiasana sunscreens azo antoka amin'ny haran-dranomasina, manarona ny hoditra amin'ny akanjo sy satroka ary misoroka ny masoandro mandritra ny ora faratampony.
Ireo mpanjifa dia afaka mifandraika amin'ny ivon-toerana momba ny mpanjifa JJCI 24/7 miaraka amin'ny fanontaniana na mangataka famerenam-bola amin'ny alàlan'ny antso 1-800-458-1673. Ny mpanjifa dia tokony hifandray amin'ny dokotera na ny mpitsabo raha misy ny fanontaniana, ny ahiahy na efa niainany ny olana mifandraika amin'ny fampiasana ireo vokatra mpamonjy voina aerosol ireo. JJCI koa dia mampandre ireo mpaninjara sy mpivarotra azy amin'ny alàlan'ny taratasy ary mikarakara ny fiverenan'ny vokatra tadidy rehetra.